Doorashada golaha shacabka oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabayo. | XAL DOON
Home NEWS Doorashada golaha shacabka oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabayo.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa guddoomiyay Shir ay habka fogaan aragga caawa ku yeesheen madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka oo diiradda lagu saaray habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorasha xildhibaannada Golaha Shacabka ee BFS, iyadoo la tix raacayo jadwalkii doorashooyinka dalka.
Dowlad-goboleedyada Jubband, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa la dalbaday in ay soo dhamaystiraan doorashooyinka Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya
Ilo ku dhow dhow shirka Golaha Wadatashiga Qaran ayaa sheegaya in isku soo hadal qaaday in shir isugu yimaadaan, balse lama go’aamin waqtiga rasmiga ah uu qabsoomi doono shirkaas.
Kulankan ayaa ah kii ugu horeeyay ee Golaha Wadatashiga Qaran ay yeeshaan tan iyo markii Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ay isku khilaafeen Kiiska Ikraan Tahliil.